पोखरामा भेटिइन सबैलाई चकित पार्ने जादुमय स्वर भएको प्रतिभा, समिक्षा र विशाखा भन्दा बबाल प्रतिभा ! - Enepalese.com
पोखरामा भेटिइन सबैलाई चकित पार्ने जादुमय स्वर भएको प्रतिभा, समिक्षा र विशाखा भन्दा बबाल प्रतिभा !
इनेप्लिज २०७६ वैशाख ४ गते ११:२५ मा प्रकाशित
कास्कीको लेखनाथकी कृपा सुनार निकै मिठो गित गाउँछीन् । स्थानिय एक स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्ने उनि १२ वर्षकी भईन् । उनले सानै देखि गित गाउथीन् तर उनले अहिलेसम्म संगितको कक्षा भने लिएकी छैनन् ।
संगित सिक्ने हो भने उनले सांगितिक क्षेत्रमा केहि गर्न सक्ने कुरामा २ मत छैन । उनले आफु पछि गायीका बन्ने सपना देखेकी छन् । स्कुलमा साथीभाई, घरमा परिवारका सदस्य र शिक्षकहरुले पनि उनको स्वर निकै मन पराउछन् ।
पछिल्लो समय युट्युबका कारण धेरै प्रतिभाहरुको प्रष्फुटन भईरहेको छ । हेर्नुहोस कृपाको प्रतिभा ।